LDS वार्ड क्रिसमस गतिविधिहरु
धर्म र आध्यात्मिकता चर्च संगठन
LDS वार्ड क्रिसमस गतिविधिहरू जुन साँच्चै क्रिसमसको आत्मालाई समात्न सक्छ
by क्रिस्ट्रा कुक
मुक्तिदाताको साक्षी सबैभन्दा बहुमूल्य वरदान हो जुन तपाईं दिन सक्नुहुन्छ
प्रायजसो वार्ड र शाखाहरू केही क्रिसमस पार्टी वा उत्सव छ। यदि तपाइँ त्यस्तो घटनाको चार्ज हुनुहुन्छ भने, वा बस यसलाई योजना बनाउन सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ, निम्न विचारहरू उपयोगी हुन सक्छ।
तपाईंले जो पनि निर्णय गर्नुभयो भने, तपाईंले येशू ख्रीष्टलाई ध्यान केन्द्रित गर्न प्रयास गर्नुपर्छ। क्रिसमसको सम्मानमा दिइने पहिलो र सरल उपहार हाम्रो स्वर्गीय , येशू ख्रीष्टको लागि स्वर्गीय बुबाको वरदान थियो। यस आधारभूत तथ्यलाई प्रतिबिम्बित घटनाहरू र गतिविधिहरू सीजनको मनोभावमा राखिदै छन्।
सेवामा जोर र सेवा दिने क्रिसमस गतिविधिहरू
येशू ख्रीष्टले आफ्नो सेवकाई र असार महिनामा एक दिन मात्र सीमित गर्नुभएन र न त हामी। सेवाको परम्परा सुरु गर्ने गतिविधिहरू सबैभन्दा उपयुक्त छन्। यसबाहेक, बाहिरी घरहरू र अन्य यस्ता सुविधाहरू तिनीहरू क्रिसमसको सिजनको समयमा सेवामा बाँचिरहेका छन् भनेर रिपोर्ट गर्छन्, तर प्रायः बाँकी वर्षको अवधिमा कमीको अनुभव गर्दछ।
उपयुक्त सेवा गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छ:
गतिविधि छनौट गर्न JustServe.org वेबसाइट प्रयोग गर्नुहोस्।
समुदायमा पहिले देखि नै अवस्थित योग्य प्रयासहरू र घटनाहरूको समर्थन गर्नुहोस्।
आवश्यकतामा दिनुहोस्। यसले खाना वा अन्य वस्तुहरू समावेश गर्न सक्छ।
अन्यथा सेवा गरिरहेका मिशनरीहरू र सैन्य सदस्यहरूलाई हेरचाह प्याकेजहरू पठाउनुहोस्।
येशू ख्रीष्टले अरूलाई सेवा गर्नुभयो। हामीले अरूको लागि के गर्नु पर्छ जुन येशू यहाँ उनीहरूका लागि के गर्नुहुनेछ यदि उहाँ यहाँ हुनुहुन्थ्यो।
एलडीएसले वास्तवमा मसीहीहरूलाई हाइलाइट गर्ने गतिविधिहरू
यो एक उत्सुक तथ्य हो कि अन्य मान्छे प्रायः थाहा छैन कि LDS सदस्यहरू वास्तवमा, ईसाई हुन्।
हामी क्रिसमस सिजन प्रयोग गर्न सक्छौं यस तथ्यलाई जोड दिन। यसबाहेक, मानिसहरू क्रिसमसको समय चर्चमा जान्छन्।
उपयुक्त गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छ:
तपाईंको स्थानीय सभाघरमा ख्रीष्ट-केन्द्रित खुल्ला घर स्टेज गर्नुहोस्।
अवलोकनको लागि नैतिकता / क्रिच प्रदर्शनीहरू प्रदान गर्नुहोस्।
एक संगीत कार्यक्रम प्रदान गर्नुहोस् जुन ख्रीष्टको जन्म मनाउँछ, जस्तै एक कोन्टाटा।
सार्वजनिक गर्न ह्यान्डलको मसीह घटना प्रस्ताव गर्नुहोस्।
लाइभ नैतिकता स्टेज गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ क्यानाडामा बस्नुहुन्छ भने, एलडीएस क्रिटिटी पन्तलाई उपस्थित हुनुहोस्। क्यानाडा मा धेरै पानाहरू राखिएका छन्। प्रायजसो वेबसाइटहरू छैनन्।
येशू ख्रीष्टको वरदानलाई मिसनरी-अभिषिक्त गतिविधि गरेर गरेर दिनुहोस्
मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्टलाई ल्याउनु हामीले हामीले दिनुपर्ने सबैभन्दा बहुमूल्य उपहार हो। कुनै पनि घटनाले येशू ख्रीष्टलाई जोड दिन्छ र उहाँले हाम्रा पापहरूको मूल्य कसरी क्रिसमसको सिजनमा राख्नुभएको छ।
सेतो क्रिसमस हुनु मौसमसँग सम्बन्धित छैन। एक सेतो क्रिसमसले बप्तिस्माहरू वा नयाँ सदस्यहरूलाई मन्दिरको लुगा लगाएर चाँडो आफ्नो आफ्नै सँधै प्राप्त गर्न सक्दछ।
नजिकैको मन्दिरमा क्रिसमस रोशनीहरू वा सबै ख्रीष्टियन-तीर्थ घटनाहरू हेर्नका लागि हाम्रो मित्रहरू लिइरहँदा मंदिर वरिपरि आउँदछ।
साता क्लॉस वार्ड वा क्रिसमस गतिविधिको भाग हुनु पर्छ?
सांता क्लॉस वार्ड क्रिसमस पार्टीको केन्द्र वा घटनाको केन्द्र बिन्दु बनाउने यीशु येशू ख्रीष्टको केन्द्रीय बिन्दु बनाउने जस्ता उपयुक्त हुनुहुन्न। यसले क्रिसमसको व्यावसायिक पक्षहरूलाई पुन: जोड्न र तीशुलाई जोड दिईने प्रयास गर्न सक्दछ, तर यी कार्य गर्नु पर्छ।
क्रिसमसमा येशू ख्रीष्टलाई उपहार दिनुहोस्
हामी अरूलाई वरदान दिन सीमित छैनौं, हामी पनि ख्रीष्ट ख्रीष्टलाई उपहार दिन सक्छौं।
राष्ट्रपति हेनरी बी इरिङले हामीलाई सल्लाह दिए:
त्यो क्रिसमसको आत्मा हो, जुन हाम्रो हृदयमा अन्य मानिसहरूलाई खुशी दिने इच्छा हो। हामीले दिनुभएको कुराको लागि हामी दिने र कृतज्ञताको मनोभाव महसुस गर्छौं। क्रिसमसको उत्सवले हामीलाई हाम्रो प्रतिज्ञालाई सधैं सम्झना र हामीलाई उहाँका उपहारहरू राख्न मद्दत गर्छ। र त्यो सम्झनाले उहाँलाई उपहार दिन हामी एक इच्छा सिर्जना गर्दछ।
उपयुक्त उपहारहरू समावेश छन्:
टूटेको हृदय / द्रष्टव्य आत्मा
हाम्रा बुबाहरूलाई राख्दै
हामी एक साधारण कार्यक्रम को रूप मा एक वार्ड क्रिसमस रात्रि मा प्रयोग गरिन्छ। यद्यपि, यो धेरै अधिक हुन सक्छ। स्वर्गीय पिताबाट निस्सन्देह प्रेरणाको लागि खुला रहनुहोस् साँच्चै क्रिसमसको समयमा येशू ख्रीष्ट र उहाँका सुसमाचारको उपहारमा ध्यान दिंदै। उपयुक्त गतिविधिहरू र कार्यक्रमहरू संरचनाले हाम्रो जीवनमा र अरूको जीवनमा वास्तविक फरक बनाउन सक्छ।
यसले हाम्रो सबैभन्दा राम्रो प्रयासको योग्य छ।
यस जीवनमा एलडीएस (मर्मन) चर्चको तीनगोल्ड मिशन
मर्मन मंदिरहरू व्यक्ति र परिवारका लागि आध्यात्मिक अस्पतालहरू छन्
वार्ड र स्ट्याक डाइरेक्टरीहरू अनलाइन र सँधै वर्तमान छन्!
एलडीएस गतिविधि आइडिया: हलिवुड चौकोर
एलडीएस सदस्यहरूलाई मदत गर्न महत्वपूर्ण सल्लाहहरू प्रभावकारी पाठहरू सिकाउँछन्
यो FHE रेखाचित्रसँग तपाईंको पारिवारिक गृह भित्रीहरू कसरी योजना बनाउँदछ
8 कारणहरू किन एलडीएस मर्मोहरू मोर्मोनहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्
7 उत्साहित एलडीएस (मर्मन) कन्भर्ट गर्दछ
अभिषिक्त आशिष् के हो र म कसरी प्राप्त गर्न सक्छु?
LDS (Mormon) मिसनरी प्रशिक्षण केन्द्रहरूमा के आशा छ
Mezuzah को परिभाषा
शनिवार मेल डेलिभरीको यस्तो राम्रो विचार हो?
मजेनी हाउस ग्लेन मुर्टक द्वारा, 1984
बोनी पार्कर द्वारा "आत्महत्याको कहानी"
WGC Bridgestone निमन्त्रणा
साधारण 10 औं गणित पाठ्यक्रम
सांस्कृतिक पारिस्थितिकी - वातावरण र मानवहरु लाई जोडना
ताइवान एक देश हो?
सफलतापूर्वक Homeschooling आमाबाबुका लागि सुझाव
रैंडी ओर्टनको पारिवारिक ट्री
आफ्नो ड्रम को बीट गर्न बाइक को विभिन्न प्रकार को पेडल
एक चित्रा स्केटिंग चैंपियन बनने को तरिका मा एक युवा बच्चाहरु को मार्गदर्शन कसरि
लिङ्क गोल्फ कोर्स के हो?
परमाणु संख्या 6
बूढो मान्छे र पोते - मध्यवर्ती स्तर पढाई को विस्तार
कसरि कन्जेगेट "इन्फ्लूएंसर" (प्रभाव मा) फ्रांसीसी मा
मिल्स कलेज जीपीए, एसट र एक्ट डेटा
ओभर / डिफेन्डिङ फुटबल कलहरू सरलीकरण गर्दै
यूहन्ना प्रेरित को प्रोफाइल र जीवनी
युरोपियन युनिभर्सिटीको इतिहास
अब्राहम लिंकन: पिशाच हंटर र अन्य चीजहरू तपाईले थाहा भएन
हिसाब गर्ने सामान र जूताहरू कसरी गर्ने प्रयास गर्नुहोस्
आर्केडिया विश्वविद्यालय प्रवेश
के भयो भने।
गाउन-माथि ग्राफिक नोभेल फ्यानको लागि कूल नयाँ मंगा